Eyona festivali kazwelonke yeelwimi ngeelwimi zoMzantsi Afrika noluncwadi enjongo zayo ikukukhulisa izakhono.
Iinjongo zethu kukubethelela umba wokufunda nokubhala eMzantsi Afrika kwanokukhulisa ubugcisa
Ngexesha lefestivali sinika ithuba ababhali abaphume izandla nabatsha abaphuma kwizifundo ngezifundo ingakumbi iilwimi ebezihlelelekile kunye nabapapashi beencwadi eMzantsi Afrika.
Kukho izinto ngezinto ezingaphaya kwekhulu ezenziwayo kunyaka ngamnye, ezifana nezi;
Ukubhengezwa kweencwadi ezimalunga namashumi amabini ukuya kwamathathu kweencwadi ezintsha.
Indawo zokuthengisa iincwadi ( Exclusive books)
Izibophelelo zosasazo (kokubhalwayo nakusasazo)
iWordstock – iphepha lemihla ngemihla
iWordfest yeMpuma Koloni
Iiprojekthi zokuzikhulisa zamabanga aphezulu
iWordfest ikunyaka wayo wesixhenxe kwaye iyakhula. Sifake neNobel prizewinners, sinike nethuba isigaba sababhali boluntu nababhali beencwadi zesintu.
Ulawulo Nomba Wezemali
IWordfest iphantsi kwesebe lesiNgesi kwiyunivesithi yaseRhodes. Umndyadala uba kwisakhiwo i-Eden Grove ekhampasini. Ulawulo lukulowo uphume izandla nonamava okhokela igqiza elo uGqhirha Chris Mann (Umququzeleli). Ezemali zilawulwa licandelo lezemali leyunivesithi yaseRhodes.
Eyona nkxaso ivela kwi NAC ( National Arts Council) kwi NLDTF ( National Lottery Development Fund/ Isikhwama seLoto), kwiYunivesithi iRhodes nakwicandelo lesiNgesi eAfrika elixhasa iWordfest njengeprojekthi yokukhulisa izakhono, kuRhulumente weMpuma Koloni, neExclusive Books.